Saamaynta Ay Ku Yeelan Karaan Dawlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya Iyo Sida Ay Dad Badani U Arkaan | Dhaymoole News
Saamaynta Ay Ku Yeelan Karaan Dawlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya Iyo Sida Ay Dad Badani U Arkaan
Madaxweynaha Dowlad Deegaanka Mustafe Muxumed Cumar oo dhawaan magaalada Jigjiga kula kulmay safiirka Mareytkanka ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in ay ku howlanyihiin la xisaabtanka mas’uuliyiintii hore iyo baaritaannada tacaddiyadii lagu eedeeyay iney geysteen.
“Dadkii dhibaatada geystay qaar badan oo ka mid ah waa la hayaa, qaar badan oo ka mid ahna waa lagu raad joogaa. Dadkii meeshan dhibaatada ka dhaceysay geystay qaarkood waxay u baxsadeen waddamada Mareykanka, Turkiga iyo meelo kala duwan, marka waa in la iska kaashado sidii dadkaas sharciga loo hor keeni lahaa” ayuu yiri madaxweyne Mustafe.
“Dawlad Deegaanka waxaaan gacan ka siinaynaa sidii loola loola xisaab tami lahaa muwaadiniinta Maraykanka ee lagu tuhmayo in ay tacaddiyada gaysteen intii ay deegaanka ku sugnaayeen” ayuu yiri Michael Raynor oo indhihiisa ku soo arkay xabsiga Jeel Ogaadeen.
”Khaladaadkii ay geysteen dowladda Itoobiya iyo Jabhadda ONLF waa waxyabaha laga heshiiyay ee ku xusan heshiiska Asmara, balse marnaba suurtagal ma ahan in la cafiyo shakhsiyaadkii ka tirsanaa maamulkii Jigjiga ee dhibaatooyinka u geysatay dadka raydika ah” ayuu yiri Ibraahim dheere.
” Waxay ila tahay in la iscafiyo oo wixii hore la iska ilaawo, sababtoo ah boqol sano khaladaadkii dhacayay hadii la yiraahdo ha la isla xisaabtamo, wixii dambe ee la qabsan lahaana xisaabtan ayuu ku dhamaan,’ marka waxaa ila qumman in dib u heshisiin la galo, madaama nidaam dhan uu dhibaatada geysanayay”. ayuu yiri Axmed-Raage oo BBC-da lahadlaya.
Isbaddalka maamulkii hore ee Dowlad Deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya ayaa ku soo beegmay xilli uu isbaddal guud ka dhacay waddanka Itoobiya, wixii ka dambeeyay markii uu xilka ra’iisul wasaaraha qabtay Dr Abiy Axmed.